यौनसम्बन्धमा विर्य नखस्ने कस्तो समस्या | Namastepost.com
यसरी लुकेर टुइट गर्छन फरार पुर्व डिआइजी नवराज सिलवाल देउवाको प्रश्नः बहुमतबिना सत्ता छाड भन्न लाज लाग्दैन ? यस्तो छ विवादित प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाण पत्र यस कारण मनाइने गरिन्छ मागेशक्रान्ति ‘आङकाजी शेर्पालाई गोली हान्न आदेश’ आनविक हतियार निर्माणमा नेपाललाई सघाउने किम जोङको बाचा, भारतमा मोदीलाई तनाब
यौनसम्बन्धमा विर्य नखस्ने कस्तो समस्या
बिबिध January 8, 2018 डा. राजेन्द्र भद्रा ,
म १८ वर्षीय युवक हुँ । मेरो लिंग पहिलेको भन्दा अति नै घटेको छ र यौनसम्बन्धमा पनि वीर्य नखस्ने तथा सानो पेट दुख्ने समस्या छ । यो समस्याको समाधान के होला ? लिंग सानो हुनु कुनै गम्भीर समस्याको संकेत त होइन नि ?
लिंगको संरचना र मापन
कैयौं किशोर तथा युवाहरूलाई आफ्नो लिंगको आकार वा लम्बाइका बारेमा पीर परेको हुन्छ । पर्याप्त जानकारी नहुँदा उनीहरू अलमल र अन्योलमा पर्छन् । त्यसैले लिंगको कार्य तथा बनावटका सम्बन्धमा केही कुरा गरौं ।
लिंग पुरुषको प्रमुख प्रजनन अंग हो र यो शरीरको बाहिरबाटै देखिन्छ । प्रजनन अंगका रूपमा यसको प्रमुख कार्य वीर्य महिलाको योनिमा राख्नु हो । त्यसैले अरू बेला लुलो भए पनि यौन उत्तेजनाका बेला यो अंग मोटो, ठूलो र कडा हुन्छ, जसले गर्दा वीर्य योनिमा राख्न सजिलो हुन्छ । यस्तो विशेष कार्य गर्नुपर्ने भएकाले यसको संरचना पनि विशेष किसिमले नै बनेको हुन्छ र यसमा विशेष स्पञ्जजस्तै तन्तु हुन्छन्, जसमा रगत भरिएपछि लिंगले उत्तेजना प्राप्त गर्छ । लिंग संरचना बाहिर देखिने जतिमा मात्र सीमित हुँदैन । लिंगको विभिन्न भागको कुरा गर्दा यसको जरा भित्रतिर (-root of penis-radix) हुन्छ, जुन जघनास्थी बीचमा दगदि या bulb of penis र दुवैतिर crus या penis का रूपमा जोडिएका हुन्छन् । लिंगको अर्को भाग body (shaft) of penis या penis हो जुन हामीले बाहिरैबाट देख्न सक्छौं र यही भागको सबैभन्दा बाहिरपट्टि केही फुकेको भाग हुन्छ जसलाई हामी नबिलक glans penis अर्थात् लिंग मुण्ड भन्छौं ।
लिंगको नाप कसरी लिने ?
सर्वप्रथम नाप्न आवश्यक सामग्री रुलर (स्केल) वा नाप्ने फित्ताको व्यवस्था गर्नुहोस् । उत्तेजित लिंगको नाप लिन सर्वप्रथम लिंगलाई पूर्ण उत्तेजनामा ल्याउनुपर्छ । लम्बाई नाप्न लिंगको फेद (base) अर्थात् लिंग शरीरमा टाँसिएको स्थान) मा राख्नुहोस् र जघनास्थी (pubic bone) मा थिचेर उत्तेजित लिंगको समानान्तर राख्दै लिंगमुण्डको टुप्पो सम्म नाप लिनुहोस् । यही नै लिंगको लम्बाई हो । जघनास्थीमा राम्रोसँग नथिची नाप लिँदा विशेष गरेर मोटो व्यक्तिको छालामा बोसो हुने हुँदा लिंग वास्तविक लम्बाइभन्दा छोटो लाग्न सक्छ ।
लिंगको मोटाइ नाप्न लचिलो नाप्ने फित्ताले उत्तेजित लिंगको बीचतिर (shaft) को सबैभन्दा मोटो भागलाई बेर्नुहोस् र नाप लिनुहोस् । यो नै लिंगको मोटाइ हो । तपाईंसँग लचिलो नाप्ने फित्ता छैन भने कुनै पातलो डोरीले नापेर रुलरमा कति छ हेर्न सक्नु हुन्छ ।
लिंग किन सानो भएको होला ?
किशोरावस्थामा विभिन्न हार्मोनको प्रभावमा लिंगको वृद्धि हुन थालेपछि वयस्कको जत्रो भएपछि मात्र यसको वृद्धि रोकिन्छ र सामान्य अवस्थामा लिंगको यो नाप वयस्क उमेरभरि नै रहन्छ । तपाईंले बुझिसक्नुभएको हुनुपर्छ, किशोरावस्थामा सामान्यत: लिंगको नाप कम हुँदै जाने स्थिति हुँदैन ।
तपाईंले आफ्नो लिंग सानो भएको कुरा गर्नुभए पनि आफ्नो लिंग सानो भएको कसरी थाहा पाउनुभयो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । तपाईंले हेरेकै आधारमा वा कसैले भनेकै आधारमा लिंग सानो भयो भन्न सकिने कुरा हुँदैन । तपार्इंले कसरी लिंगको लम्बाई वा मोटाइ नाप्नुभयो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । आशा गर्छु, तपाईंले माथि उल्लेख गर्नुभएझैँ आफ्नो लिंग नाप्नुभएको थियो र पुन: त्यही तरिकाले नै नाप्दा फरक अर्थात सानो भएको पाउनुभयो भने मात्र लिंगको नापमा केही फरक आएको भन्न सकिने स्थिति हुन्छ ।
विशेष गरेर किशोरावस्थामा लिंग सानो भएजस्तो लाग्ने स्थिति अधिक मोटोपनका कारणले हुन्छ । यस्तो स्थितिलाई buried penis भनिन्छ । यस्तो स्थितिमा लिंग body (shaft) of penis शरीरको अधिक बोसोमै धसिएको स्थिति हुन्छ र बाहिरबाट लिंग सानो देखिन्छ । यो स्वास्थ्यका दृष्टिले खासै गम्भीर मान्नुपर्ने स्थिति होइन, तै पनि पिसाब फेर्दा असजिलो हुने, अग्रचर्मको संक्रमण हुनेदेखि पिसाबको धारालाई आफूले चाहेको स्थानमा पार्न नसक्ने जस्ता समस्या सिर्जना हुन्छन् र लिंगको सरसफाइमा केही असजिलो हुन्छ, तर यो समयका साथ आफैं ठीक हुने भएकाले विशेष उपाचारको आवश्यकता पर्दैन । अर्कातिर किशोरावस्थामै अत्यधिक मोटोपनको सिकार हुनुका आफ्नै समस्या हुन्छन् भन्ने कुरा समेत बिर्सनु हुँदैन ।
यसबाहेक अन्य केही स्थितिमा लिंग छोटो भएको हुन सक्छ । विशेष गरेर चोटपटक लाग्नु अनि Peyronie’s disease जसमा लिंगमा बाङ्गोपन पनि आउँछ कारण हुन सक्छ । पौढ व्यक्तिमा पौरुष ग्रन्थिको क्यान्सरको उपचारमा गरिने शल्यक्रियाले पनि लिंग छोटो बनाउन सक्छ, तर तपाईंमा यी सबै हुने स्थिति नभएको कुरा तपाईंको प्रश्नबाटै बुझ्न सकिन्छ ।
समाधानका लागि के गर्नुपर्ला ?
समस्याको समाधानका लागि सर्वप्रथम त तपाईंको लिंग वास्तवमै सानो हुँदै गएको हो कि होईन पक्का गर्नुपर्छ । मोटोपनका कारणले तपाईंलाई आफ्नो लिंग सानो जस्तो लागेको पनि हुनसक्छ । यस्तो स्थितिमा अनावश्यक चिन्ताले फाइदा गर्दैन । त्यसबाहेक अन्य केही कारण हो कि होइन भनेर पत्ता लगाउन चिकित्सकीय परीक्षण गराउनुपर्छ ।
अन्त्यमा एउटा कुरा के भनौं भने तपाईंले पहिलेको जस्तो लिंग उत्तेजना नभएको कुरालाई यहाँ मिसाउनुभएको त होईन ? यदि त्यसो हो भने लिंग उत्तेजनाका आ–आफ्नै कारण र समाधान हुन्छन् । यस विषयमा केही जिज्ञासा छ भने प्रश्न पठाउन नबिर्सनुहोला ।
चुनावको नाममा प्रचण्ड र विक्रम पाण्डे जस्ता नेताले आफ्नो कालो धन यसरी खर्च गरे
बालकृष्ण ढुङ्गेलको चर्चित कविता : तिमिले बन्दुक रोक भन्ने बेला सम्म पनि म तिम्रो लागि प्रीय नै थिए
यसरी लुकेर टुइट गर्छन फरार पुर्व डिआइजी नवराज सिलवाल
यस्तो छ विवादित प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाण पत्र
धन कमाउने नयाँ तरिका यसरी भए रोडदेखि करोडपतिसम्म
राजनीति January 15, 2018
कविता January 15, 2018
HOT NEWS January 14, 2018
नेपाली सेनाको २० करोडको ज्याकेट टेन्डरमा धाँधली ? ब्ल्याकलिस्टेट मुन्काको दौडधुप
देश January 13, 2018